မည်သည့် နိုင်ငံသားက ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပျမ်းမျှအသက်ရှည်ဆုံးဖြစ်မည်နည်းဟု သင်သိချင်မှာ
အခုတော့ အဲဒီမေးခွန်းအတွက်အဖြေကို အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ
သူတို့ ရဲ့ တရားဝင်ရည်ညွှန်းကိုးကားစရာ သုတေသနပြုစာရင်းမှာကြေငြာခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကမ္ဘာမှာ အသက်အရှည်ဆုံးဘွဲ့ ကို မြေထဲပင်လယ်က ကျွန်းကလေးတစ်
ခုဖြစ်သည့် မိုနာကို ကျွန်းကလေးက တစ်ခြားနိုင်ငံကြီးတွေကို အနိုင်ယူသွားပါတယ်...
စီအိုင်အေက ထုတ်ပြန်သည့် ကမ္ဘာ့ အချက်အလက်များမှတ်တမ်းအရ မိုနာကိုကျွန်းကလေးတွင်
မွေးဖွားသူများဟာ ပျမ်းမျှသက်တမ်း ၈၉.၆၈ နှစ်ရှိမည်ဟုခန့် မှန်းလိုက်တာမို့ ယနေ့ (ယခုနှစ်)
မေးဖွားသည့် ကလေးငယ်များဟာ ၂၁၀၁ နှစ်အထိနေနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ခြားဘယ်နိုင်ငံ
သားမှ မကြွားနိုင်သည့် သက်တမ်းရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်...
ဘာကြောင့် ထိုကျွန်းသားများ တစ်ခြားသူများထက် ပိုပြီးအသက်ရှည်နိုင်ရသနည်းဆိုသော်ကား
ထိုကျွန်းကလေးရှိ အနည်းငယ်မျှသော လူဦးရေနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေအရ
မြင့် မားမှုတို့ ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်...
မိုနာကို ဟာ တစ်မျိူးသားလုံးထုတ်ကုန်က ၆ ဘီလီယံဒေါ်လာ ( တစ်ဦးချင်းကုန်ထုတ်တန်ဖိုး
၇၄၄၀၄ ) ရှိလို့ လူဦးရေ ၃၀၅၁၀ သာရှိတဲ့ ကျွန်းသူကျွန်းသားတွေအတွက် ကျန်းမာရေစောင့် 
ရှောက်ဖို့ အတွက် လုံလောက်ပါတယ်....
ဒုတိယသက်တမ်းအရှည်ဆုံးနိုင်ငံသားများကတော့ တရုတ်ပြည်ကျွန်းဆွယ်ကလေး မကာအို မှ
ဖြစ်ညပီး သက်တမ်းကတော့ ၈၄.၄၃ နှစ်ပြီး မိုနာကိုကျွန်းသားများထက် ၅ နှစ်လျော့ တာမို့ 
မကာအိုတွင် ယခုနှစ်မွေးဖွားသည့် ကလေးငယ်များဟာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၂၀၉၆ ခုနှစ်အထိ အ
ဂျပန်နိုင်ငံသားများကတော့ပျမ်းမျှသက်တမ်း ၈၃.၉၁ နှင့် တတိယလိုက်ပြီး စင်္ကာပူသားများက (၈၃.၇၅)
ဖြင့် စတုတ္တ၊ ဥရောပတောင်ပိုင်း ဆန်မာရီနိုနိုင်ငံသား ဆန်မာရီနီး များကတော့ ၈၃.၀၇ နဲ့ ပဉ္စမ လိုက်ပါ
ယူအေအီးကတော့ အမှတ် စဉ် ၇၁ မှာ ( စုစုပေါင်း ၂၂၁ နိုင်ငံထဲမှ ) ပျမ်းမျှသက်တမ်း ၇၆.၇၁ နှစ်ရှိပါ
အာရပ်ပင်လယ်ကွေ့ နိုင်ငံများကတော့ မည်သည့် နိုင်ငံမျှ ထိပ်ဆုံးအဆင့် ၅၀ အတွင်းမ၀င်နိုင်ကြပါဘူး...
ပင်လယ်ကွေ့ နိုင်ငံများထဲမှ ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည့် ဘာရိန်းနိုင်ငံက ( ပျမ်းမျှသက်တမ်း ၇၈.၂၉ ဖြင့် ) ပထမ
ဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အမှတ်စဉ် ၅၂ တွင်ရှိပြီး ကာတာနိုင်ငံက အမှတ်စဉ် ၅၄ ( ပျမ်းမျှသက်တမ်း ၇၈.၀၉ )
ဖြစ်ပြီး ကူဝိတ်နိုင်ငံက မှတ်စဉ် ၆၆ ( ၇၇.၂၈ ပျမ်းမျှသက်တမ်း ) ဖြစ်ပါတယ်...
အိုမန်က ပျမ်းမျှသက်တမ်း ၇၄.၄၇ ဖြင့် အမှတ်စဉ် ၁၀၃ ၊ ဆော်ဒီကတော့ပျမ်းမျှသက်တမ်း ၇၄.၃၅ နှစ်
ဖြင့် အမှတ်စဉ် ၁၀၇ မှာ ရှိနေပါတယ်...
ဗြိတိန်နိုင်ငံက ပျမ်းမျှသက်တမ်း ၈၀.၁၇ ဖြင့် အမှတ်စဉ် ၃၀၊ အမေရိကန်နိုင်ငံက ၇၈.၄၉ နှစ်ဖြင့်အမှတ်
စဉ် ၅၀၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံက ၇၅.၉၄ နှစ်ဖြင့် အမှတ်စဉ် ၈၂၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ၇၁.၉၄ နှစ်ဖြင့် အမှတ်စဉ်
၁၃၂၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ၇၁.၆၂ နှစ်ဖြင့်၁၆၀၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက ၆၆.၃၅ နှစ်ဖြင့် အမှတ်စဉ် ၁၆၅၊
တောင်အာဖရိကသားများက ၄၉.၄၁ နှစ်ဖြင့် အမှတ်စဉ် ၂၁၉ မှာရှိနေပါတယ်...
ရွှေပြည်ကြီးကတော့ ပျမ်းမျှသက်တမ်း ၆၅.၂၄ နှစ်ဖြင့် အမှတ်စဉ် ၁၆၇ မှာချိတ်ပါတယ်...နိုင်ငံပေါင်း ၂၂၁
ကိုယ့် အောက်ကတိုင်းပြည်တွေကြည့် ပြီးစိတ်ဖြေရမလား ( ကမ္မောဒီးယားနဲ့ လော အပါအ၀င် ) ၊ တစ်
ခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင် တို့ လောက်တောင် သက်တမ်းမရှည်နိုင်ရ
ပါ့ မလားလို့ ရင်နာရမလားပါပဲ...
ပူပူနွေးနွေး အချစ်ဆုံး ဘကုန်းကုလား ဘင်္ဂလားဒေ့ ရ်ှကတောင် ပျမ်းမျှသက်တမ်း ၇၀.၀၆ နဲ့ ၁၄၇
အဆင့် ရှိတာမို့ ဝမ်းနည်းရမလား ၀မ်းသာရမလားပါဗျာ....
Source: CIA’s Word Factbook
Ever wondered which nationalities live the longest? You don’t have to wonder anymore, as it has been answered by the Central Intelligence Agency’s (CIA) latest update to its Word Factbook – an official reference resource.
The Mediterranean island of Monaco trumps every other country in the world in terms of the average life expectancy of its citizens. According to the World Factbook, those born in Monaco are expected to live an average age of 89.68 years, i.e.,ababy born today will live until 2101 – an average that no other nationality can boast of.
Why do they live longer than anyone else? For starters, you might want to creditatiny population andahigh GDP per capita for the higher average age: Monegasques enjoyaGDP of $6 billion (GDP per capita of $74,404) – enough money, one would imagine, to look after the healthcare needs ofapopulation of just 30,510.
Nationals in the Chinese peninsula of Macau have the second best average life expectancy of 84.43 years – five years less than those in Monaco – andaMacau baby born today will, on an average, live until 2096.
The Japanese, with an average life expectancy of 83.91 years are the third in line, followed by the Singaporeans (83.75 years) and the Sammarinese (nationals of the southern European country of San Marino), who enjoy an average life expectancy of 83.07 years.
So, where does UAE stand? Way below at No. 71 (out ofatotal 221 countries), with Emiratis enjoying an average life expectancy of 76.71 years at birth. In fact, none of the GCC countries figure in the Top 50. GCC topper Bahrain (average life expectancy of 78.29 years) debuts at No. 52 on the list, followed by Qatar at No. 54 (78.09 years), Kuwait at No. 66 (77.28 years), and then the UAE.
Nationals of GCC peers Oman and Saudi Arabia don’t feature in the Top 100, with Omanis enjoying an average life expectancy of 74.47 years (No. 103) while the Saudis living an average of 74.35 years (No. 107).
Among other major expat nationalities in the country, the British enjoy an average life expectancy of 80.17 years (No. 30), Americans have an average age of 78.49 years (No. 50), Sri Lankans live an average 75.94 years (No. 82), followed by Filipinos (71.94 years, No. 132), Indonesians (71.62 years, No. 135), Bangladeshis (70.06 years, No. 147), Indians (67.14 years, No. 160), Pakistanis (66.35 years, No. 165) and South Africans (49.41 years, No. 219).
Posted by peter kyaw | at 1:03 AM |
Labels: source: CIA’s Word Factbook